Cummins Inc., oo ah hoggaamiye awood caalami ah, waa shirkad ka kooban cutubyo ganacsi oo iswaafajiya naqshadeynta, soo saarista, qaybinta iyo u adeegida matoorada iyo teknoolojiyada la xiriira, oo ay ku jiraan nidaamyada shidaalka, kontaroolada, hawo qaadista, sifeynta, xallinta qiiqa iyo qaababka dhalinta korantada. Xarunteeduna tahay Columbus, Indiana (USA), Cummins wuxuu u adeegaa macaamiisha ugu yaraan 190 dal iyo dhulal iyada oo loo marayo shabakad ka badan 500 shirkadood oo leh shirkado madax-bannaan oo qaybiyayaal ah iyo qiyaastii 5,200 goobood oo ganacsato ah
MTU waa mid ka mid ah soosaarayaasha hogaaminaya aduunka ee matoorada waaweyn ee naaftada ah taariikhdoodana waxaa dib loo raadin karaa sanadkii 1909. Marka lagu daro MTU Onsite Energy, MTU waa mid ka mid ah noocyada hormoodka u ah nidaamka Mercedes-Benz Systems waxayna had iyo jeer si joogto ah safka hore uga jirtay horumarka farsamada. Mashiinnada MTU waa matoorka ugu habboon ee lagu wadi karo warshad koronto naaftada ah.
Soosaarida isticmaalka shidaalka oo hooseeya, mudooyin adeegyo dhaadheer iyo qiiqa hooseeya, Sutech MTU matoorrada naaftada waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa qaybta gaadiidka, dhismayaasha, isgaarsiinta, iskuulada, isbitaalada, maraakiibta, goobaha saliidda iyo aagga tamarta warshadaha iwm.
Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. (SDEC), oo leh SAIC Motor Corporation Limited oo ah saamileyda ugu weyn, waa shirkad weyn oo tiknoolajiyad sare leh oo ku hawlan cilmi baarista iyo horumarinta iyo soo saarista matoorada, qaybaha matoorrada iyo qalabka koronto dhaliyaha, oo leh a xarun farsamo oo heer gobol ah, xarun shaqo oo heer jaamacadeed ah, khadad wax soo saar oo heer caalami ah iyo nidaam hubin tayo leh oo buuxiya heerarka gawaarida. Kuwii hore waxay ahayd Warshad Mashiinka Diesel ee Shanghai oo la aasaasay 1947 waxaana dib loogu habeeyay shirkad saamiyadeed la wadaago sanadkii 1993 oo leh saamiyada A iyo B.
Labadaba saqafka kore ee monoblock iyo cutubka qaboojiyaha monoblock derbiga ayaa leh waxqabad isku mid ah laakiin waxay bixiyaan meelo kala duwan oo rakibid ah.
Qaybta saqafka saqafka sare waxay u shaqeysaa sifiican meesha booska gudihiisa ee qolku uu xadidan yahay maxaa yeelay maheysto meel banaan oo gudaha ah.
Sanduuqa uumiga waxaa sameeya xumbada Polyurethane wuxuuna leeyahay waxyaabo aad u wanaagsan oo kuleylka kuleylka ah.
Hawo-qaboojintu waa halka hawo-qaboojiyaha hawo-qaboojiyaha ahi yahay unug dhexe oo hawo-qaboojiye ah oo u adeegsada hawo ahaan isha qabowga (kuleylka) iyo biyaha oo ah dhexdhexaad qabow (kuleyl). Iyada oo ah qalab isku dhafan oo loogu talagalay ilaha qabowga iyo kuleylka labadaba, bamka kuleylka qaboojiyaha ayaa baabi'inaya qaybo badan oo kaabayaal ah sida munaaradaha qaboojinta, matoorrada biyaha, kuleyliyaha iyo nidaamyada dhuumaha u dhigma. Nidaamku wuxuu leeyahay qaab-dhismeed fudud, wuxuu keydinayaa meel rakibidda, dayactirka iyo maaraynta habboon, wuxuuna keydiyaa tamarta, gaar ahaan ku habboon meelaha aan lahayn ilaha biyaha.